နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ဟိုရောက် ဒီရောက် အတွေးများ
Labels: Tag Post, ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း
အတွေး တွေကို စုံနေတာပဲ ... >>>
အဟိ .. :)
ဒါကြောင့်လဲ သိင်္ဂါဝတ္ထုတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပေါ့
ပြီးတော့ သိင်္ဂါ့အတွေးကို ဖတ်ရခြင်းအားဖြင့်
သိင်္ဂါက နုနုညံ့ညံ့တွေ မကြိုက်ဘဲ
ချက်ကျလက်ကျရှိတယ်.. နောက် တို့နဲ့ စာရေးဆရာ အကြိုက်တူတယ်..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ပြီးတော့ ကျေနပ်ပါတယ်.. သေသေချာချာလေး ရေးထားပေးတာဘဲ.. ရေးပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးသိင်္ဂါ..
သိ င်္ဂါကျော် ဆိုတာ ယောင်္ကျာလေး တစ်ယောက်လား ။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်လား ။ :D
ကို သိ င်္ဂါကျော် ဆိုပြီး ပြောတော့မလို့ ... :)
အတွေး ဆိုမှ တော့ ဒီလိုပဲ ရောက်တတ်ရာရာပေါ့ ခင်ဗျာ ...
အစ်မရေ...ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ အတွေးတော်တော်များများ သမီးနဲ့တူနေတယ် :)
း) တွေးဗျာ တွေး အစ်မတို့တွေးမှ ကျွန်တော်တို့
အတွေးတွေကတော့ ကောင်းတယ် ... ဒီလိုပါပဲ စိတ်ကူးတွေက အရာရာကို ပြီးပြည့်စုံစေတယ်လေ ...
သိဂါင်္လိုပဲ.. တို့လည်း ခေါင်းထဲက အတွေးတွေ အလိုလို ရေးပြီးသားဖြစ်သွားရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ အမြဲ စိတ်ကူးယဉ်မိတယ် :)
အတွေးလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ပျော်နေရတာ ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းလဲနော်..။ ဆက်သာတွေး သိလား။ ဒါမှ တို့လည်း သိဂီါစာတွေ အများကြီး ဖတ်ရမှားD
အစ်မရေ...အစ်မရဲ့ အတွေးတွေကစုံလို့ပါလား...ဒါပေမယ့် အတွေးကောင်းလေးတွေချည်းပါပဲ...
ဒါနဲ့ အစ်မရေ...အစ်မရဲ့ ပရိုဖိုင်းထဲမှာ Location က ပြည်လို့ပါနေလို့...အစ်မက ပြည်သူလား ပြည်မှာနေတာလားဟင်???
အတွေးပေါင်းစုံကို အတွေးများစွာ နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ...။
ပြေတီဦး ရိုက်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ကားကိုတော့ မကြည့်ဖူးပါ။ ဒါပေမဲ့. .ဒီကားက ဒွေးရဲ့ လူကြီး ဖြစ်ချင်တယ် ကားကို ပြောတာ ထင်တယ်။ ဒွေးလို့ လူတွေ မသိခင် အချိန်မှာ သူ့ကို ကျနော် ဒီကားနဲ့ စပြီး သတိထားမိတာပဲ။
အခု နောက်ပိုင်း ပြေတီဦးက ဒွေးကားတွေကိုချည်းပဲ ပြန်လိုက်ရိုက်နေပါလား။
လောကမှာ တုပြီး တူလို့ မဖြစ်ဘူး...
ဒါရိုက်တာ လုပ်ရင် ပြောဗျာ...
template အသစ်လေး မိုက်တယ်..
စိတ်ကူးလိုက်ရုံနဲ့ စာတွေရေးပြီးသားဖြစ်ဖို့ ညီမလည်း စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတယ်။ ဆုတောင်းပြည့်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်..
မ အတွေးလေး တွေကို ပြန်ရေးထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။=)
ဟိုရောက် ဒီရောက်အတွေးတွေကို တစ်စုတစည်းထဲ ဖတ်သွားပါတယ်။ ဒီလို တွေးတတ်တာကိုက ပညာရှိ။
မမရေ..မွန်လည်း ပျော်စရာ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲ ကြိက်ပေမယ့် ..ကိုယ်တိုင်ရေးတော့ အလွမ်းအဆွေးတွေပဲ ရေးချင်တယ်။
စုံလင်လှတဲ့အတွေးလေးတွေကို တွေးတောရင်းနဲ့ ဖတ်သွားတယ်နော်